के तपाईलाई थाहा छ ? फेसबुकबाट यसरी कमाउन सकिन्छ लाखौँ – Online Marg
के तपाईलाई थाहा छ ? फेसबुकबाट यसरी कमाउन सकिन्छ लाखौँ
Posted on Sunday, January 19th, 2020 12:20 PM Sunday, January 19th, 2020 12:25 PM by अनलाइनमार्ग डट कम डेस्क
फेसबुक विश्वकै नम्बर एक सामाजिक सञ्जाल हो।यसमा करिब १।३ विलियन प्रयोगकर्ताहरु विश्वभरबाट जोडिएका छन्। प्राय यसका प्रयोगकर्ताहरुले दिनमा एक पटक फेसबुक खोलेकै हुन्छन्। त्यसैले आफ्नो व्यापार व्यसाय र उत्पादनको बारेमा विश्वलाई जानकारी दिन फेसबुक सजिलो माध्यम बनेको छ।
साना होस् वा ठूला सबै खाले व्यवसायहरुले आजभोलि फेसबुकमा आफ्ना उत्पादनको विज्ञापन गरि प्रचार प्रसार गरिरहेका हुन्छन्। फेसबुकमा तपाईँ हामीले लाइक नगेरको पेजबाट स्पोन्सर भनेर देखिने पोस्टहरू नै विज्ञापन हुन्।
जुन फेसबुकलाई पैसा तिरेपछि मात्र त्यसरी देखिन्छन्। यहीनै फेसबुकको मुख्य आम्दानीको श्रोत हो।
जस्तै फेसबुकको मोबाइल एप्सबाट कुनै समाचारका लिंक खोल्दा अन्य साइटहरु भन्दा छिटो खुल्छन् र फेसबुकमा जस्तै त्यहाँ पनि स्पोन्सर भनेर विज्ञापन आउँछन्।
अनि इडिट एचटिएमएलमा किलिक गर्नुहोस्। त्यहाँ धेरै कोडहरु देखिन्छ अब फाइन्ड अप्सनको प्रयोग गरि </head> लाई भेटाउनुहोस र त्यो भन्दा मथिल्लो लाइनमा अघि कपि गरेको कोड पेस्ट गरि सेभ थेममा क्लिक गर्नुहोस्।
फेसबुकबाट आफ्नो इन्स्टेन्ट आर्टिकल एप्रुभ भएर आएपछि आफूले पैसा कसरी प्राप्त गर्ने हो त्यो विवरण पेआउट अप्सनमा खाख्नुपर्छ। नेपालमा भएको बैंक खातामा पनि पैसा रिसिभ गर्न सकिन्छ।
पेआउट अकाउन्ट बनाउँदा तपाँइको पान नम्बर वा ट्याक्स नम्बर भर्नुपर्ने हुन्छ यदी छैन भने नागरिकता नम्बर वा पासर्पोट नम्बर पनि राख्न सकिने फेसबुकमै कार्यतर एक कर्मचारीले आफ्नो व्लगमा लेखेका छन्।
Posted in विज्ञान, प्रविधि तथा शिक्षा मार्गTagged #फेसबुक
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले आफ्ना प्रयोकर्तालाई पैसा बाड्ने नीति लिएको छ । फेस
तपाईंले आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड आफूलाई मात्र थाहा छ, म मात्र खोल्न �
स्कुले विद्यार्थीले ३ दिनमै गरे यस्तो चमत्कार, नासाका वैज्ञानिक समेत आश्चर्यचकित !
अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासामा प्रशिक्षार्थीको रुपमा छोटो समय �
सावधान ! बाथरुममा ग्यास गिजर राख्नुभएको छ ? नुहाउँदा ज्यानै जान सक्छ !
यसैसाता काठमाडौंको मिलनचोकमा नुहाउन बाथरुम छिरेकी स्वशिका लिम्�
भुलेर पनि नबन्नुस् Vianet इन्टरनेटको ग्राहक, हेर्नुस् यसरी फसाउछ ग्राहकलाई !
ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी भायनेट कम्युनिकेशन प�
सुरक्षाको कारण देखाउँदै अमेरिकी सेनाले बढ्दो रूपमा लोकप्रिय टिक�
दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूँज�
भुलेर पनि नराख्नुस् यी ५० पासवर्ड
साइबर सुरक्षाका लागि अनलाइन अकाउन्टको पासवर्डहरु सुरक्षित तथा म�
गुगलले १७ करोडसम्म पुरस्कार दिने, पुरस्कार जित्न के गर्ने ?
प्रविधि कम्पनी गुगलले आफ्ना केही एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा भएका सुरक्षा त्र�
नेपालमै पहिलोपटक बन्यो कमालको एप, एउटै एपबाट सबै एप चलाउन मिल्ने
फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब, टिकटक, इन्ष्टाग्राम, हाम्रो पात्रो, पठाओ, दराज एप लगा